GV Face: Momba An’i Beirota sy Parisy, Nahoana Ny Zavadoza Sasany No Misarika Ny Sain’izao Tontolo Izao, Ary Ny Hafa Tsia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2015 2:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Swahili, Română , English
‘An'izao tontolo izao ny vatana sasany, fa mijanona ho an'ny eo an-toerana, ho an'ny faritra, “ara-poko” kosa ny ankamaroan'ireo vatana hafa’
Ato amin'ity ampahany ho an'ny GV Face ity, ny andianà Global Voices Hangout (Ambohipihaonan'ny Global Voices), resahan'i Joey Ayoub, bilaogera Libaney sady mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, Lova Rakotomalala, mpamoaka lahatsoratray amin'ny teny Frantsay monina ao Parisy ary Laura Vidal, mpitantana ny vondrom-piarahamonina Amerika Latina ary monina ao Parisy, ny momba ny foko niaviana, ny politikan'ny fahafatesana ary ny fanehoankevitra tsy mifandanja amin'ireo zavadoza mitranga manerana ny tany.
Vondrom-piarahamonina tsy manana sisintany, saiky mpanoratra mpirotsaka an-tsitrapo maherin'ny 1400, mpandalina, manampahaizana momba ny media an-tserasera ary mpandika lahatsoratra no mandrafitra ny Global Voices. Mametraka fandaharampotoana momba ny vaovao izahay.izay manorina tetezana, fahatakarana ho an'izao tontolo izao ary fisakaizàna mivoaka ny sisintany. Ifantohanay ny filazàna ireo tantara avy amin'ireo vondrom-piarahamonina atao an-jorom-bàla sy zara raha misy mpisolo tena. Ireo ekipa mahatoky avy ato aminay, ahitàna ny mpanoratra sy mpamoaka lahatsoratra — olona toa an-dry Joey, Laura, ary Lova — dia mitatitra avy any aminà firenena 167 manerana izao tontolo izao. Ireo mpandika lahatsoratra ato aminay indray no manampy amin'ny famadihana ireny tantara ireny ho aminà tenimpirenena 35 mahery. Maro amin'ireo mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina misy anay no mahay tenimpirenena maromaro sy miantso ny tanana sy firenena iray na mihoatra ho tanindrazany.
Taorian'ilay fanafihana tao Parisy tamin'ny 13 Novambra teo, nanoratra lahatsoratra iray i Joey nomeny lohateny hoe, “Haiko tahaka ny araben'i Beirota ny araben'i Parisy“, izay niparitaka be tokoa:
Avy aminà vondrom-piarahamonina miteny Frantsay nahazo tombony avy ao Libanona no niaviako. Nidika izany fa nahita foana an'i Frantsa ho toy ny tanindrazako faharoa aho. Haiko tahàka ny araben'i Beirota ny araben'i Parisy. Vao tany Parisy mihitsy aho andro vitsy lasa izay.
Nisy alina roa nisianà herisetra nampivarahontsana. Ny voalohany namoizana aina maherin'ny 40 tao Beirota; ny faharoa namoizana aina maherin'ny 120 tao Parisy ary mbola mitohy ny fanisàna.
Toa tahàka ny mazava amiko koa hoe tsy misy dikany ho an'izao tontolo izao ny fahafatesan'ny vahoakako ao Beirota raha mitaha amin'ny fahafatesan'ireo vahoakako hafa ao Parisy.
Izahay tsy manana ny bokotra “tsy manahy” ao amin'ny Facebook. Izahay tsy mahazo ireo fanambaràna alimbe avy amin'ireo lehilahy matanjaka indrindra sy vehivavy velona ary ireo an-tapitrisa mpampiasa aterineto.
Izahay tsy manova ny politika izay hiantraika amin'ny fiainan'ireo mpitsoa-ponenana tsy manantsiny tsy tambo ho isaina.
Tsy afaka ny hazava kokoa noho izao ity.
Tsy misy hatezerana no hilazàko an'io, fa fotsiny alahelo.
Tangorontrano iray monja niala avy eo amin'ilay trano fisotroana no nisy an'i Laura Vidal raha nipoaka ny fanafihana voalohany ao amin'ny trano fisakafoana iray tamin'ny 13 Novambra tao Parisy. Fito taona lasa izay i Laura no nifindra avy any Venezoela nankao Parisy amin'ny maha-mpianatra azy. Ao anatn'ny, “Taorian'ny Fanafihana Tao Parisy: Ho Firaisan-tsaina, Tsy Afaka Hifanavakavaka”, hoy izy misaintsaina:
Ny andrana nataon'i Lova, “Creating a Media of Empathy One Letter at a Time“, namoaka taorian'ireo fanafihana ny Charlie Hebdo, niarahany nanoratra tamin'i Nwachukwu Egbunike, mpandray anjara ao amin'ny Global Voices Nizeria, hoe :
Tsy rehefa miantraika ny zavadoza fa mialoha ary amin'ny loha mangatsiatsiaka no fotoana fanaovana adihevitra midadasika momba ny fanafihana mampihorohoro, ny fahalalahana maneho hevitra, ny fiarahana mizaka ny mafy sy ny fankahalàna Silamo.
Na izany aza, na tiantsika na tsia, ambony be ny hetahetan'ny olona mba hampisy dikany ity izao tontolo izao ity rehefa mitranga ireo zavatra mampalahelo tahàka izany. Mety tsy ho lafatra ny fametrahana ny fotoana, saingy ananatsika ny fahafahana amin'ny maha-mpandray anjara antsika amin'ny media, mba hamerina hifehy ny resak'ireo mpamaky an'arivony manerana ny tany, raha ilay mbola liana iny ry zareo.